आइसोलेशनसहितको अस्पताल निर्माण गर्न समिति गठन - Jagaran Post
जागरणपोस्ट २१ बैशाख २०७८, मंगलवार ०९:४४
काठमाडौँ : काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड–१९ महामारीको नियन्त्रणका लागि सुविधासम्पन्न आइसोलेशनसहितको अस्पताल निर्माणका लागि उपयुक्त प्रस्ताव पेश गर्न वडा नं ३ का अध्यक्ष दीपक केसीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
कापमले तर्जुमा गर्ने महामारी नियन्त्रण कार्यक्रममा डा. गणेश गुरुङ, डा अर्जुन कार्की, डा. अनुप सुवेदी र डा. शरद् वन्तलाई स्वास्थ्यविज्ञका रूपमा आमन्त्रण गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यस क्रममा वडाध्यक्षहरु दलबहादुर कार्की, नीलकाजी शाक्य, शुद्धकुमार डङ्गोल, दीपेन्द्र लामा र दीपक केसीले महामारी व्यवस्थापन गर्न वडा तहबाट कठिन हुँदै गएको धारणा राखेका थिए ।